မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ ဗဟိုကော်မတီ အရေးပေါ်အစည်းအဝေးနှင့်ပတ်သက်၍ ပါတီ လေ့ကျင့်ရေးဌာနမှူး/ CEC နိုင်ရဲဇော်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း (၂) မေး - (နစက)နဲ့ ပူးပေါင်းတဲ့ကိစ္စမှာ မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီအပေါ် အတော် ပြင်းထန်တဲ့ ဝေဖန်ချက်တွေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာ ကြားရပါတယ်။ ပါတီအခြေခံစည်းမျဉ်းကို ရေးဆွဲရာမှာ ပါဝင်ခဲ့သူတစ်ဦးအနေနဲ့ရော အဲဒီအခြေအနေအပေါ်မှာ ဘယ်လို သဘောထားအမြင်...
123...5,7385,738 ၏စာမျက်နှာ 2
မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ ဗဟိုကော်မတီ အရေးပေါ်အစည်းအဝေးနှင့်ပတ်သက်၍ ပါတီ လေ့ကျင့်ရေးဌာနမှူး/ CEC နိုင်ရဲဇော်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း...
အပိုင်း ၂ မှ အဆက် နိုင်ရဲဇော် - ဒီ ကောင်စီရဲ့ ကောင်းခြင်း ဆိုးခြင်း တစ်ခုလုံးဟာ ပါတီတစ်ခုလုံး ပြန် ရိုက်ခတ်လာနိုင်တယ်။ ကောင်းခြင်း ဆိုးခြင်းနဲ့ Action တစ်ခုလုံး၊ ပြန်ရိုက်ခတ်မှုတစ်ခုလုံး၊ Reaction တွေအားလုံးကို ပါတီက ခံစားရလိမ့်မယ်။ ပါတီရဲ့ လမ်းကြောင်းအနေနဲ့...
မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ ဗဟိုကော်မတီ အရေးပေါ်အစည်းအဝေးနှင့်ပတ်သက်၍ ပါတီ လေ့ကျင့်ရေးဌာနမှူး နိုင်ရဲဇော်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း အပိုင်း (၁) မေး - မတ်လ ၁၅ ရက်က သံဖြူဇရပ်မှာ မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ ဗဟိုကော်မတီအရေးပေါ်အစည်းအဝေး လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်။ အဲဒီမှာ ဆွေးနွေးဖြစ်ကြတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ပြောပြပေးပါဦး။ နိုင်ရဲဇော် - နိဒါန်းပြောရရင်တော့ ကျွန်တော်က...
မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ အတွင်းရေးမှူး(၃) နိုင်စိုးမြင့်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း အပိုင်း - ၁ လက်ရှိအာဏာပိုင်ဖြစ်နေသည့် တပ်မတော်၏ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတွင် မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီက တစ်နေရာ တာဝန်ယူပေးရေး ကမ်းလှမ်းချက် လက်ခံထားခြင်းအပေါ် ပါတီတွင်း သဘောထားအမြင် မတူညီမှု ရှိနေကြောင်း သိရပါသည်။ မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီအကြီးအကဲပိုင်းမှ လက်မခံသူအချို့က မဟာမိတ် ဖြစ်သော မွန်ပြည်သစ်ပါတီကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃...
အာဏာသိမ်း စစ်အစိုးရ ကောင်စီတွင် မွန်ပါတီက တစ်ဦး ပါဝင်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် မွန်သံဃာတော်တစ်ပါး၏...
Interviews February 12, 2021
မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ - MUP အကြီးအကဲများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သူ မွန်သံဃာတော် ခြောက်ပါးအနက် တစ်ပါး အပါအဝင်ဖြစ်သည့် ဆရာတော် ‘အရှင်ဝရဝံသ’ထံ တွေ့ဆုံလျှောက်ထားမေးမြန်းခြင်း အာဏာသိမ်း စစ်အစိုးရ၏ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသို့ မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး စေလွှတ်ရေး ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် မွန်သံဃာတော် ဆရာတော်ကြီးများက သဘောတူကြောင်း မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ - MUP က...
မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ ဗဟိုကော်မတီ အရေးပေါ်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်မည်၊ အာဏာသိမ်း စစ်အစိုးရ၏ ကောင်စီဝင် ကမ်းလှမ်းချက်...
သတင်း February 9, 2021
ရန်ကုန် ဖေဖော်ဝါရီ ၈ အာဏာသိမ်း စစ်အစိုးရ၏ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဝင်တစ်ဦး တာဝန်ယူပေးရန် ကမ်းလှမ်းချက်အပေါ် မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ (MUP) က သဘောတူလက်ခံထားခြင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပါတီတွင်း ပြန်လည်သုံးသပ် ဆွေးနွေးသွားရန်ရှိကြောင်း MUP အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင် နိုင်စိုးမြင့်ထံမှ သိရသည်။ လာမည့် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ တွင် ပြုလုပ်ရန် လျာထားသည့် ပါတီ...
Fact Check : UEC ရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပြန်ပြီးသား သတင်းမှားအပေါ် အခြေခံတဲ့ ထပ်ဆင့်သတင်းမှား ဆက်လက် ဖြန့်ဝေနေ ပြန့်ပွားနေ Thursday, November 26, 2020 ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌက မဲခိုးမှုတွေကို ဝန်ခံတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းဟာ သတင်းမှားဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က နိုဝင်ဘာ...
Hi Burma Honesty Information 16/11/2020 ခင်ဘုန်းမို့ ဥပဒေပြုရေးမဏ္ဍိုင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ လွှတ်တော်အတွင်းမှာ အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်တွေကို လာမယ့်အစိုးရသက်တမ်းရောက်ရင် ပိုမြင်တွေ့ရတော့မှာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာစုနှစ်တွေမှာ ဓလေ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာအချို့ကအမျိုးသမီးတွေကို နိုင်ငံရေးနဲ့ဝေးကွာစေခဲ့ပေမယ့် မျက်မှောက်ကာလမှာတော့ နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းထဲမှာ အမျိုးသမီးတွေ...